Urur Ka Shaqaynaya Midnimadda Somaliwayn oo Muqdisho Dhalinyarro Reer Somaliland ahi Kaga Dhawaaqeen | Baligubadlemedia.com
Urur Ka Shaqaynaya Midnimadda Somaliwayn oo Muqdisho Dhalinyarro Reer Somaliland ahi Kaga Dhawaaqeen
Magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayaa lagaga dhawaaqay urur loo bixiyay badbaado oo ay ku bahoobeen dhalinyaradda kasoo jeeda Somaliland ee ku sugan Magaaladaasi.
Illo-Wareedyo u dhuun daloola Ururkaasi oo aanu helnay ayaa daaha ka rogay in Magaalada Muqdisho gaar ahaana Hotelka lagu magacaano “Hilaac UK” in lagu qabtay munaasabad lagaga dhawaaaqay Dallada “BADBAADO” oo ay ku bahoobeen qaar ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda Somaliland ee ku sugan wadanka Soomaaliya .
Ujeedada laga leeyahay dalladan BADBAADO ayaa lagu sheegay in dhalinyaradan ka soo jeeda somaliland ee ku sugan Muqdisho ay hormood ka noqdaan sidii loo heli lahaa midnimadii soomaaliyeed ee ku buruburtay gacanta koonfurta soomaaliya.
Goobjoogayaal Warbaahinta xog kasiiyay munaasabaddaasi ayaa sheegay inay ururkaasi Dabada ka riixayeen qaar ka mid ah Xildhibaanada ku jira Baarlamaanka Soomaaliya ee Somaliland ka soo jeeda iyo siyaasiyiin kale.
Tiro kor u dhaafaysa Afar Kun Oo Dhalinyaro ah ayaa labadii bilood u dambeeyay ka baxay magaalooyinka Somaliland kana degay Muqdisho sida lagu sheegay daraasad la sameeyay, dhalinyartaasi oo lagu tilmaamay kuwo shaqo raadi ah.